eye cancer – Healthy Life Journal
All posts tagged "eye cancer"
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. အရင်ဆုံး မျက်ခွံမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေအကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. မျက်ခွံကို အရေပြားနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ ကင်ဆာအားလုံးက မျက်ခွံမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက မျက်ခွံမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာတွေကတော့ Basal Cell...